China abicah Abanye mveliso kunye nabenzi | SJJ
Izinto ze-silicone zisetyenziselwa ngokukodwa kwaye zihlanganisiwe okanye zidityaniswe nezinye izinto zenze umhlaba wethu waba mhle ngakumbi, ubomi bethu baba lula ngakumbi kwaye banomdla. Izinto ze-silicone zifumaneka kuyo yonke indawo ezisetyenziswa ngumntu wonke nokuba sele ekhulile okanye abantwana.
Izinto ze-abicah zinempawu ezininzi eziluncedo:
* Ithambile kwaye inzima kuzo zonke iintlobo zobukhulu kunye neemilo
* Ingqele kunye nokumelana eshushu, ukumelana amanzi kunye lula icocwe ukuze ilingane iimeko zemozulu ezahlukeneyo
* Amanqanaba okutya, i-Eco-friendly kunye nokusingqongileyo okulungele ukutya kunye nokutya
* Ehlala ductility ixesha elide kusetyenziswa
* Iimpawu ezinemibala zinomtsalane kwimbonakalo kunye nokukhushulwa, intengiso kunye nezipho njalo njalo.
Izipho zethu eziMhle ngokuKhazimlayo zinezinye izinto zesilicone zomngundo okomileyo womkhenkce, iibhibhi zomntwana, iminqwazi yebhotile, iiglasi zewayini, iziphawuli zeglasi zewayini njalo njalo. Abaqambi abalumkileyo basazama ukwenza izinto ezininzi ze-silicone ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Uyilo lwakho lwayo nayiphi na into lwamkelekile. Nceda uthumele imibuzo yakho nangaliphi na ixesha ngolwazi oluthe kratya, unxibelelwano lobuchwephesha, iimveliso ezikumgangatho ophezulu, inkonzo ebalaseleyo iya kunikwa ngexesha elifutshane!
Iimathiriyeli: izinto abicah
MOQ: Xoxa ityala ngetyala
Egqithileyo Izinto zekhitshi laseSilicone